Gidragidra (émeutes) | GAZETY_ADALADALA
Tanteraka ny famoriana vahoaka teo amin’ny kianja 13 mai ny 26 janoary 2009 teo, ary nahazo olona maro dia maro tokoa. Saingy….saingy….
Rehefa tonga ny tamin’ny:
* 12h 00 ka nifarana ny kabary teo an-toerana dia roso ny dia fa hoe ho an’ny amin’ilay tany nototofan-dRavalomanana eny Andohatapenaka ny rehetra. Nandalo teny amin’ny Radio Nationale Anosy ny sasany tamin’ireo mpilahatra. Feno olona mantsy ny manodidina ny farihy.
Raha i Andry Rajoelina efa any Andavamamba, ny rambon’ny filaharana kosa dia mbola mbola any amin’ny Radio Nationale Anosy. Tamin’ireo olona taraiky taty aoriana ireto no nisy andian-jatovo (toa ireo antsoin’ny maro amin’ny hoe bande organisée irony). Nidiran’izy ireo an-keriny ny RNM ary nopotehiny ny fitaovana tao. Nalainy izay azony nolanjaina, ary nodorany avy eo ny tanàna. Amin’ny 12h 30 izay rehetra izay no niseho
40 mn taorian’ny nialana teo Anosy: Avy eo dia nihoraka irep mpanaraka an’i Andry nony tonga teny Andavamamba fa ho an’ny Anosipatrana. Namaly i Andry fa tsy izany no programa, fa ho any Andohatapenaka.. Nitokona tsy nety nandeha ireto andian’olona ireto, ka tsy nahaleo dohika azy i Andry. Ry Andry lasa nanohy ny diany, ary ireto farany lasa nankany amin’ny MBS. Tonga tany tokony ho tamin’ny 13h 00 teo ho eo. Nisy miaramila tokony ho 50 tany ho any teo am-bavahady, nibosesika ny olona; nitifitra ny miaramila ka mpianatra iray (Paul, teraka ny 21 mai 1974). Nandositra ireto miaramila ireto rehefa hitany fa tsy ho voafehy intsony ny raharaha. Toa tsy miaramila Malagasy no nahitan’ny olona azy. Ary raha ny feo nandeha teny an-toerana, dia nisy iray tamin’ireto mpitandro filaminana koa matin’ny olona. Nodorana ny MBS avy eo. Tsy mbola maty ny afo tamin’ny 17h, satria na ny fiara mpamonjy haintrano aza dia tsy afaka niditra nanao ny asany.
Nirohotra nankeny Tanjombato indray ireto andian’olona ireto, na ny ampahany (satria toa nizarazara izy ireo), ka lasa nankeny Tanjombato mba handroba sy handoro ny MAGRO. Olona an’arivony no mitanjozotra mivoaka sy miditra ao ary nanemno ny arabe (efa ho amina kilometatra ny halavany). Hatrany Andoharanofotsy ka hatraty Andrfan’Ambohijanahary dia ahitanao olona miloloha vary amin’ny gony, na mitatitra amin’ny moto, na amin’ny sarety, na amin’ny 3CV, na ny chariot sy ny caddy tao ihany no nitaterana ny entana. Karazana entana maro no nalaina tao. Tsy ankifidy fa na menaka amin’ny barika, na moto Scooter, na vary sy siramamy amin’ny gony. An-tapitrisa maro ny tetibidin’ny entana entin’ny tsirairay, ary misy tena fianakaviana mihitsy no miara-mientana mitaona izany. Nisy ny olona voahitsakitsaka teo ampidirana, misy koa ny sempotry ny fipoahan-javatra tany anaty magazay tany, ary dia torana tavela any. Tsy fantatra izay hiafarany, fa ny maro amin’ireo olona tonga teny dia ny haka zavatra aloha, izay vao misaina zavatra hafa.
Ankorondrano: Rehefa avy naka ny entana tao sy nandoro ny MAGRO + AUDITORIUM ity andiany iray ity dia lasa indray nifindra tao amin’ny JUMBO SCORE sy ireo mpiray tokotany taminy tao amin’ny ZOOM. Tsy nisy niangana na Banky, na Fivarotana (Courts, …) Samy nilanja indray avy eo. Ary ny nahatsikaiky dia ny nahita fa hatramin’ny voninkazo maniry anaty pot aza dia hitan’izy ireo bataina. Nisy ireo naka fotsiny aloha(satria ny olona ko mba maka), ka rehefa ety ivelany vao mijery hoe inona ilay azo. Rehefa tsy dia ilaina loatra dia amindy, na dia ho 1000Ariary ihany aza.
Teto dia tsy arako intsony na fotoana nitovy na efa taorian’ny teny Ankorondrano, fa nisy nandroba sy nangalatra daholo koa ny tao amin’ny CITIC Behoririka…Nidiran’olona sy norobaina koa ny tranon’ny loholona Mox Ramandimbilahatra, ary avy eo nodorana, na dia nitalaho aza ity olona ity fa aza dorana ny trano, fa efa lasanareo ihany ny entana. 50 taona no nanangonako ireny, hoy izy. Tsy nisy mpihaino anefa izay antso izay.
Teny an-dalana hamonjy fodiana no nahitako olona marobe mitaona entana koa avy ao amin’ny MAGRO Behoririka. Mena amin’ny barika, ranomboankazo, savony, cahiers, sns…Nalaman’ny menaka mihitsy ny arabe, ka raha tsy mitandrina mafy dia misosa eny ambony moto.
19h00 Tonga tety amin’ny SUPREME CENTER indray ny andiany sasany. Niantso maika ny Radio Antsiva aho mba hiantso sy hilaza amin’ny onjam-peio ny zava-misy. Tsy ela tokoa dia nandeha ny filazana tao. Saingy tsy nisy fepetra noraisina hitandroana ny filaminana. Namaky tsy amin-tahotra ny varavarana ambany. Ny tompon-tanana kosa any amin’ny arabe ambony no vonton-dranomaso fotsiny fa tsy nisy azo natao.
Raha ny zavatra voamariko nandritry ny nanatrehako ny teo amin’ny SUPREME CENTER dia misy filohany mitarika sy mibaiko ireto andian’olona ireto. Misy mantsy ao anatiny ao ny mibaiko hoe ‘Mivoaka indray aloha mba hidiran’ny sasany e!). Dia mirohotra mivoaka tsy misy fepetra ny ao anatiny. Niteraka fandosirana sy sahotaka tety ivelany izany satria noheverin’ny olona fa tonga ny mpitandro filaminana. Andosirana daholo izay mety ho elakelan-trano, na dia maizin-kitroka sy tsy fantatra hoe mankaiza aza. Rehefa afa-po teto amin’ny SUPREME CENTER moa ry zareo dia niteny indray tao anaty haizina tao ilay ‘mpitarika’ fa anjaran’ny Tsaralalana indray izao. (Lasa teto ny saiko, hoe mba nisy valiny ve ny antso nataoko sy nampitain’ny RADIO ANTSIVA, ny amin’ny mba hidiran’ny mpitandro filaminana).
Efa tena hariva be ny andro, dia heno niteny tao amin’ny Radio Antsiva ny Ben’ny tanàna, sy ny mpiray minisitra. Nanameloka ny fanimbana sy ny fandrobana i Andry Rajoelina, ary niantso ny vahoaka mba ho tony. Efa misy hoy izy ny eritreritra fihaonana androany 27 janoary 2009, nefa na dia izany aza dia mbola mitohy koa ny 13 mai. Toheriny kosa anefa ny fikotrehana korontana toy iny omaly iny, ary manentana ireo mpiandraikitra ny filaminana sy ny vahoaka izy mba hifampitsikilo ihany koa, fa misy hoy izy, andian’olona alefa eny anatinareo eny mba hanakorontana fotsiny.
Raha mbola teo amin’ny CENAM ny Ben’ny tanàna dia efa re fa nisy olona niforona koa tany IVATO tany,saiky hanao hadalana toy izao.
Fony mbola teo amin’ny kianjan’ny 13 mai ihany moa dia efa nisy iray tamin’ireo mpanakorontana no voasambotry ny vahoaka.
Tamin’ireo tranga rehetra ireo ny nahagaga dia tsy nihetsika ny mpitandro filaminana, na dia hita teny antsefantsefany teny ihany aza, raha tsy efa taorian’ilay antson’ny Ben’ny tanana sy ny Praiminisitra.
Raha ny teo amin’ny SUPREME ohatra dioa nolazain’ny olona fa nisy miaramila 2 camions tonga teo, fa avy eo dia lasa rehefa nahita ireto vahoaka maro. Dia raikitra avy eo ny opération.
Misy dia misy tokoa ny fanararaotana tsy am_piheverana ao anatin’ity raharaha ity. Ary izay tena tsiniako indrindra dia ny fanimbana zavatra. Fa angaha tsy fantatra hoe tezitra raha tsy manimba sy mandrava.
May izao ny RNM sy ny TVM, may miaraka aminy koa ny tahirim-peo sy tahirin-tsary maro. (Enga anie mba hisy toerana hafa efa natokana ho amin’izany, ka tsy ho tao daholo ireo tahiry ireo). Raha ny société iasako manokana izao, dia manana toerana roa fitahirizana ny asa. Atao dika mitovy ny asa, ka misy alefa any an-toeran-kafa foana mba ho tahiry. Fantatra hatr’izay fa toerana saropady, sy tsy maintsy hisian’ny fitakiana toy izao ireny Radio sy TV ireny, ka hadalana raha tsy nisy fepetra ho fiarovana ny tahiry toy iry nolazaiko etsy ambony.
Asakasak’izay tompon’antoka nanome baiko ireny mpandroba ireny fa tena ‘sauivage be’ no itsarako ny zavatra nitranga. Mbola ho ela vao hahay haneho hevitra ny Malagasy raha izao hita izao no hanakarana azy. Fa raha sanatria ka ianareo mpanohitra no tao ambadik’izao zavatra miteraka fatiantoka tsy hita pesimpesenina izao, dia manodiava ny taranakareo, fa ny vahoak no mihinanan ny tadin-kirarony amin’ny lalao ratsinareo. Enga anie ka tsy ho izany, fa mba sendra nyadala tsy hay fehezina isika rehetra.
Re koa fa may ny NAZA eny amin’ny Arcades, vaky ny BAO LAI, voadoro ny BluePrint
Efa halina no saika hampitaina ireto vaovao rehetra ireto, saingy tapaka ny aterineto rehefa tokony ho tamin’ny fito ora hariva mahery kely tany ho any, ary tsy tafaverina tato an-trano intsony ny tena raha tsy efa tamin’ny 23h (iraikambinifolo alina)
Ny sary sasany momba izany dia ao amin’ny flickr
Sao HAMBOM-PO DISO TOERANA ZALAHY a!
11 maty teny Tanjombato vokatry ny fifanosehana sns.., ary nandriaka koa ny rà omaly halina noho ny tifitra sy fanenjehana rehefa niditra -tsehatra ny mpitandro filaminana omaly halina. Taorian’ny fandrobana ny tety Behoririka sy Soarano. Poa-basy tsy nifandrenesana tety amin’ny manodidina hatramin’ny manodidina ny misasak’alina, raha teo amin’ny 23h teo no nanomboka
Vaovao farny azo izao amin’ny 07h 30 maraina (21/01/2009): Mijanona any an-trano avokoa ny olona rehetra androany fa foana ny eny an-kianja. Mba tsy hitomboan’ny fanosoram-potaka ny Ben’ny tanàna sy hijerena akaiky ny filaminana.
« TAPAKA NY VIVA ‘Mitomania ianao ry taniko’ »
Hery, on 27/01/2009 at 7:29 said:
Izao daholo ry Andry Rajoelina sy ny tariny vao manomboka manenina sy miantso fandriam-pahalemana. Toa efa tara loatra ihany. Tsy noheverina angaha fa izao no hitranga rehefa vahoaka noana sy mahantra no asaina manao désobéissance civile?
Mirehareha ianao fa afaka mitondra firenena kanefa ny vondron’olona kely taritinao aza tsy voafehinao rehefa tena tsy mandray andraikitra ny miaramila.
Fa nankaiza daholo ireo nantsoina hoe Andrimasom-pokonolona izay nolazaina fa « vahoaka » mpanohana an’i Andry? Nivadika ho mpandroba?
Main’ny afo natsangany izao i Andry.
tomavana, on 27/01/2009 at 10:37 said:
Hafa ihany ny manatri-maso fa tsy mitatitra honohono …
Misaotra amin’ny tatitra Avylavitra 🙂
Dia hiaraha-mahita eo izay avoak’ity fihaonana kasain’ny roa tonta ity
beza, on 27/01/2009 at 11:11 said:
Misaotra amin’ny vaovao e
mitaintaina be ihany ny tena
tapaka ihany koa izao ny internet any amin’ny particulier, omaly mba afaka nifandray tamin’ny fianakaviana fa androany tapaka tanteraka.
Ny fitondrana ambavaka no azo hatao, satria tsy adidin’ny mpanao politika ihany io fa misy anjarako ihany koa, anjarako satria kristianina aho, ary maro tamin’ireny nanimba zavatra sy nandroba ireny no mamndeha any ampiangonana.
Anjarako satria raha mbola tsy tafaita ny fahamarinana dia mbola hatsaraina ihany koa izany ny fomba fisan’ny kristianina.
Ny mpanao politika dia hila eo ihany amin’ny fotoanany fa ny fiangoanana dia mijanona izay anisan’ny toerana ahafahana hanovana toetsaina.
Satria tokoa ny toe-tsaina no mila hovaina , fa mba hilantsika malagasy amin’ny korontana iskain’ny misy tsy fitoviankevitra.
hevitro izaho samy irery io mba tiako hampitaina, tsy voatery hanaraka ianao fa afaka manao fandinihana fotsiny.
ity teny ity mansty dia mba hinoako:
ka ilay olona nantoina tamin’ny anarany dia tsy iza fa izaho na ianao mankany ampiangonana, ny KRITSIANINA izany.
tsy ny mpitondra ihany izany fa isiska rehetra.